प्रकाशित मिति: 2018/12/17
काठमाडौं । कांग्रेस महासमिति बैठक राजधानीमा शुक्रबार सुरु भएको छ। कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनपछिको दुई वर्षपछि हुन लागेको यो महासमितिले कांग्रेसलाई एउटा नयाँ उर्जा दिने अपेक्षा गरिएको छ। पार्टी संगठनलाई जीवन्त र क्रियाशील बनाउन नेतृत्वले विधानको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्ने महासमिति सदस्यहरूले बताएका छन्।
संघीय संरचनाबमोजिम पार्टी संगठन निर्माण गर्नुपर्ने र नेतृत्वमा रहेको गुटउपगुट अन्त्य गरी योगदान र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनीहरूले मत राखेका छन्। महासमिति बैठकस्थलमा रहेका प्रतिनिधिसँग गरेको संवादः
विनोद कायस्थ, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल तरुण
कांग्रेस नेतृत्वमा जारी संविधानबमोजिम पार्टीलाई संघीय संरचनामा लैजानुपर्छ। विधानमा पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ताको भावनाअनुसार काम गर्नुपर्छ। विधान जस्तोसुकै राम्रो भए पनि पार्टी नेतृत्व भिजिनरी, क्षमता र खुबी भएको भएन भने त्यो विधान कागजको खोस्टो हुन्छ। विधानमा धेरै कुरा लेखिएको नहोस् तर नेतृत्व भिजिनरी भयो भने त्यसले पार्टीलाई जनताको माझमा स्थापित गराउँछ।
महाधिवेशन भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्यो तर अहिलेसम्म विभाग र अन्य निकाय गठन गरिएको छैन। साढे दुई वर्षमा बल्ल पदाधिकारी नियुक्त गरियो। अहिले धेरै जिल्लामा संगठनले पूर्णता पाएको छैन। संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशीका सम्बन्धमा कांग्रेसको धारणा स्पस्ट पार्नुपर्छ।
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा कांग्रेसले किन हार बेहोर्नुपर्‍यो त्यसबारे छलफल गर्नुपर्छ। चरम गुटबन्दीको अवस्थाबाट पार्टीलाई मुक्त गर्नुपर्छ। महासमिति कर्मकाण्डी तवरले टुंगियो भने कार्यकर्तालाई उत्प्रेरणा मिल्दैन। उनीहरूमा निराशा छाउँछ।
मोहन बराल, पूर्वसभासद् तथा पूर्वजिल्ला सभापति सिन्धुली
कांग्रेसको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार पार्टीमा एक वर्ष काम गरिसकेको नेपालीलाई सदस्यता दिने र एकै प्रकारको मात्र सदस्य हुने व्यवस्थाले कांग्रेसमा अब आकर्षण बढ्नेछ।
केन्द्रीय सदस्यको खुलातर्फको संख्या बढाउनुपर्छ । कम्तीमा ३० प्रतिशत सदस्य खुला प्रतिस्पर्धाबाट चुनिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
यो महासमितिमा गत निर्वाचनको समीक्षा हुनुपर्छ।
पार्टीको सांगठनिक गतिविधि पुरानो ढंगले चल्दैन। २१ औं शताब्दी सुहाउँदो ढंगले भ्रातृ सस्थाहरू चलायमान गराउनुपर्छ। गन्तव्यहीन यात्राबाट हामी अघि बढ्न सक्दैनौं।
रञ्जित कर्ण, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल विद्यार्थी संघ
विधान संशोधनका लागि मात्र महासमिति बैठक बस्न लागेको होइन। पार्टी विधानमै महासमिति बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। राजनीतिक र आर्थिक प्रतिवेदनका विषयमा केन्द्रीय समितिमा बहस हुन पाएन।
विधान संशोधनका विषयमा मात्र बहस भयो। केन्द्रीय समिति बैठकमा कतिजना उपसभापति र महामन्त्री बनाउने भन्ने बारेमा बढी छलफल भएको छ। मुलुकका जनताका विषयमा बहस र छलफल भएको छैन।
उहाँहरूको छलफल रणनीतिक रुपमा महाधिवेशनलाई लक्ष्य गरेर भइरहेको छ। मुलुकले धार्मिक स्वतन्त्रता घोषणा गरेको छ तर प्रधानमन्त्री एउटा विवादस्पद क्रिस्चियन धर्मको प्रचारमा लाग्नुभएको छ। त्यसको विरोध गर्न प्रतिपक्षी भएर कांग्रेस सक्षम देखिएन। समाजवादी आर्थिक नीतितर्फ कांग्रेसका नेताहरूले ध्यान दिएका छैनन्।
बिजुला बर्मा, सभासद् (प्रदेश ३)
खुलातर्फ केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या बढाउनुपर्छ। पदाधिकारीमा पनि अलिक संख्या बढाउनुपर्छ। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक रूपान्तरणका लागि पहल गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
आर्थिक समृद्धिका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्दा जनताको हितलाई ध्यान दिनुपर्छ। बिपीले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई अँगालेको सिद्धान्त फलो गर्नुपर्छ।
जनताको चाहनाविपरीत लादिएको परिवर्तनमाथि हामीले बहस गर्नुपर्छ। शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति बन्द हुनुपर्छ। मुलुक परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता भएको नेतृत्व पनि खोज्नु छ।
सुभाषकुमार पोखरेल, कांग्रेस पूर्वसभापति, खोटाङ
महासमिति बैठक विधानका लागि मात्र होइन, यो एउटा स्वायत्त संस्था हो। कार्य समितिले एक वर्षसम्म गरेको कामको समीक्षा महासमितिले गर्छ। राज्य संरचना परिवर्तन भएकाले विधान संशोधन गर्न लागिएको हो। त्यसैले यो महासमिति बैठकमा विधान परिवर्तनको एजेन्डा बढी उठेको हो।
विधान मात्र महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। विधान परिवर्तन नगर्दा के कांग्रेसको संगठन चलेको छैन त ? सभापति, महामन्त्री र केन्द्रीय समितिले काम त गरिरहेको छ नि।
पार्टीका मूलभूत २ वटा एजेन्डा महत्त्वपूर्ण छन्। आर्थिक र सामाजिक एजेन्डा खासगरी विधानभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्।
नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य कस्तो हुने भन्ने कुरा राजनीतिक विषयमा जोडिन्छ। महासमितिले यसमा आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँछ। बीपीले महासमिति बैठकमा विज्ञहरूले कांग्रेसले गरेका कामको समीक्षा गर्ने उद्देश्यले गठन गर्नुभएको थियो। तर अहिले नेताहरूको इच्छाबमोजिम कहिले बोलाउँछन त कहिले बोलाउँदैनन्।
पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छा राम)
प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार २०७४ कांग्रेस विधानमा अब सातै वटा प्रदेशमा एक, एक जना उपसभापति र एकएक जना महामन्त्री राख्नुपर्छ। केन्द्रमा एउटा उपसभापति र एक महामन्त्री राखेर उनीहरूले जिल्लाबाट आएको सिफारिसबमोजिम हरेक निर्वानमा उम्मेदवारलाई टिकट दिनुपर्छ। जिल्ला, क्षेत्र र स्थानीय तहबाट आएको सिफारिसअनुसार टिकट दिएपछि हुन्छ। केन्द्रमा एक कोषाध्यक्ष र एक सहकोषाध्यक्ष चाहिन्छ।
अनुशासनको कारबाही गरेपछि पार्टी एकजुट हन्छ। गुटबन्दीले पार्टीलाई घाटा हुन्छ। जिल्लाको सिफारिसबाट प्रदेशको महामन्त्रीको सिफारिसबमोजिम टिकट दिनुपर्छ। अनुशासनको कारबाही नगर्ने र माया मोह राख्ने हो भने पार्टी बलियो हुँदैन।
भ्रातृ संगठनको नेतृत्व लिनेले राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ, जसरी हबल्दारलाई जिम्मेवारी दिएपछि कमान्ड सम्हाल्छ।
रमेश महत, महासमिति सदस्य, नुवाकोट
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि पार्टी संगठनलाई सोहीबमोजिम बनाउन र विधान संशोधन गर्न महासमिति बैठक यसपटक झन् महत्त्वपूर्ण छ।
केन्द्रीय कार्य समिति, जिल्ला, क्षेत्रीय कार्य समिति, निर्वाचनको विषय, टिकट वितरणका प्रक्रिया र संघीय संरचनालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका कोर्न सक्नुपर्छ। क्रियाशील सदस्यको व्यवस्था कसरी गर्ने, पार्टीका कार्य समितिलाई कसरी परिचालन गर्ने र अधिकार बाँडफाँट कसरी गर्ने तथा जिम्मेवार कसरी बनाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो।
निर्वाचनमा हामी पराजय हुनाको कारणबारे समीक्षा हुन सकेको छैन। पराजयको जिम्मेवारी सभापतिले लिने कि केन्द्रीय समितिले लिने भन्ने विषयमा मात्र केन्द्रित भयो तर त्यसमा भ्रातृ संस्थाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ।
महासमिति बैठकमा निर्वाचनमा पराजय हुनुको कारणबारे छलफल हुनेछ। कांग्रेस विधान खराब छैन। तर, यसको कार्यान्वयन र पालना नगर्दा समस्या देखिएको हो।
क्षितिज भण्डारी, महासमिति सदस्य, कैलाली
महासमिति सदस्यहरूको लामो मागपछि बैठक बस्दैछ । २१ औ शताब्दी सुहाउने स्मार्ट कांग्रेस कसरी बनाउने ? पार्टीका जिम्मेवार सदस्यको भूमिका के ? पार्टीका भ्रातृ संगठन, शुभच्छुक संस्थाको भूमिका के हुने भन्ने स्पष्ट धारणा महासमिति बैठकबाट आउनुपर्छ । महासमिति बैठकबाट लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता रक्षाका लागि ठोस कार्ययोजना पेस गर्न सक्नुपर्छ।
दुई तिहाइ कम्युनिस्ट सरकारले स्वेच्छाचारी रूपमा धर्म–संस्कृति, जनताको सुरक्षाका लागि जसरी नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढिरहेको छ त्यो दम्भ निरुत्साहित गर्न महासमिति बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ । नेपालको शासकीय स्वरुप संघीयतामा गइसकेका बेला कांग्रेसले त्यस किसिमको सांगठनिक विस्तार गर्नुपर्छ।
अनिता शर्मा, महाधिवेशन प्रतिनिधि, नवलपरासी
कांग्रेसले उदार आर्थिक नीतिमा परिमार्जन गर्न जरुरी छ। समय सान्दर्भिक आर्थिक नीति तथा पार्टीको राजनीतिक मुद्दालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ।
कांग्रेस केन्द्रीकृत छ, यसलाई तल्लो निकायसम्म विस्तार गर्नुपर्छ। अनुशासन कमिटीलाई वडासम्म पुर्‍याउनुपर्छ। प्रतिनिधि चयन केन्द्रबाट हैन स्थानीय तहबाटै हुने संरचना बनाउनुपर्छ।
क्षमतावान् कार्यकर्तालाई पार्टीमा आकर्षित नगरिएसम्म पार्टी जीवन्त बन्न गाह्रो छ। पार्टीमा अनुशासनको एक किसिमको अभाव भएको मैले महसुस गरेको छु। पार्टीमा निष्ठावान् कार्यकर्ताको मूल्यांकन भएको छैन।
पार्टीमा ३६४ रहने तर चुनावका बेला कांग्रेसलाई असहयोग गर्ने भोट नहाल्ने जुन विडम्बना छ त्यस्ता कार्यकर्तामाथि कडा कारबाही नभएसम्म पार्टी कसरी सुदृढ हुन सक्छ ?